Izahay dia mpanamboatra matihanina manana 12 taona amin'ity sehatr'asa ity. Miaraka amin'ny orinasa sy mpivarotra izahay
Inona ny fe-potoana alefanao?
EXW, FOB, CFR, CIF,, DDU, DDP (arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa)
T / T, L / C amin'ny fahitana, Paypal, Western Union
Inona ny volanao?
Manodidina ny 10-30 andro, miankina amin'ny fandaharam-pamokarana sy ny antsipirian'ny kaomandinao.
Manana ny fanamarinana ny mpanara-maso ve ianao?
Eny manana ny inspecteur izahay. Nipetraka tao amin'ny ozinina izy ireo ary nanara-maso ny fitaovana hatrany amin'ny entana, manamarina sy maka sary izahay mandritra ny famokarana rehetra
Manome santionany ve ianao, maimaimpoana na fanampiny?
Maimaimpoana ny santionany, fa ny fandefasana kosa dia mila aloa eo anilanao.
Ahoana no ahazoako ny vidiny tsara indrindra?
Azafady mba omeo ny antsipiriany momba ny vokatra ilainao mba hahafahako manome anao ny tolotra tsara indrindra amin'ny voalohany. Izay volavola sy filàna hafa mila ampitaina aminay any aoriana any amin'ny WhatsApp, WeChat, Skype, Mail ary fantsona hafa. Hamafiso ny vidiny.
MOQ dia 1 taonina. Samihafa ny hateviny sy ny moq.
Azo ekena ve ny fitsidihana ataon'ny orinasa?
Eny, ny fitsidihan'ny orinasa dia raisina an-tanan-droa hatrany ary ny fizahana toy ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo okay.
Ohatrinona no azo ampidirina anaty kaontenera feno?
Kaontenera 20ft, miaraka amina paleta, enta-mavesatra 16-21 taonina eo ho eo, tsy misy pallet, enta-mavesatra 20-24 taonina Kaontenera 40ft, entao manodidina ny 26 taonina.
Inona ny fizotry ny baiko?
Alefaso ny fangatahanao amin'ny antsipiriany → Volavola ho anao → Hamafiso ny teny nindramina ary ataovy ny fandoavam-bola → Fitsapana bobongolo → Fanaovana santionany → Fitsapana santionany (fankatoavana) → Famokarana faobe → Fanaraha-maso habetsahana → Famonosana → Aorian'ny serivisy → Famerenana averina ...
Inona ny fomba fandefasana?
Mety ho Ocean Shipping, Airlift ary Express (EMS, UPS, DHL, TNT, ary FEDEX). Ka alohan'ny hametrahana baiko dia mifandraisa aminay mba hanamafisana ny fomba fandefasana tianao.
Manatrika fampiratiana ve ianao?
Eny, mazàna izahay dia manatrika fampirantiana fanaovana sonia any Shanghai indroa ao anatin'ny herintaona (ny iray amin'ny volana martsa ary ny iray kosa amin'ny septambra). Ary nanatrika ny SGI Dubai, Fespa Europe, sns izahay amin'ny ho avy dia hanampy an'i China Import and Export Fair (Canton Fair) ao amin'ny lisitry ny fampirantiana, ary koa ny fampirantiana iraisam-pirenena izay hatao any amin'ny firenena samihafa.
Raha misy olana ara-kalitao rehefa mahazo ny vokatray ianao dia asehoy anay sary ary rehefa avy mifanakalo hevitra izahay dia hanome ny very avy amin'ny baiko manaraka.